ဤ 20 နာရီအွန်လိုင်းလေ့ကျင့်မှုသည်အလုပ်ရှာဖွေသူများအားဘီစီဘီလိုင်စင်ရကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်ကျောင်းများရှိကလေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကိုရရှိစေသည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအစည်းအဝေးများမှတစ်ဆင့် Online Responsible Adult သင်တန်းသည်ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားများကိုမွေးဖွားသည်မှ စ၍ 12 နှစ်၊ လမ်းညွှန်မှု, ကျန်းမာရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်အာဟာရ။
ယခုဗြိတိသျှကိုလံဘီယာအစိုးရသည်ကလေးသူငယ်များနှင့်အလုပ်လုပ်သူတိုင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူသောလူကြီးသင်တန်းကိုပြဌာန်းထားသည်။
ဒီအွန်လိုင်းတာဝန်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းကို BC ကလေးစောင့်ရှောက်ခွင့်လိုင်စင်အက်ဥပဒေ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အနည်းဆုံး 20 နာရီကလေးစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းများပေးရန်၊ ကလေးများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဘေးကင်းရေး၊ ကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အာဟာရစသည်တို့အပါအဝင်လိုအပ်ချက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ယူနိုင်သောလူကြီးသင်တန်းအွန်လိုင်းသင်ကြားမှုသည် BC နှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအားအရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန်အတွက်ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သင်တန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများအဆင်ပြေသောအခါသင်တန်းကိုစတင်နိုင်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်သည်။ အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ငွေပေးချေပြီးနောက်ကျောင်းသားများသည် login ညွှန်ကြားချက်ပါသည့်ကြိုဆိုသည့်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ ကျောင်းသားသည်သင်ခန်းစာများကိုစတင်ရန်အီးမေးလ်ရှိ link ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာဉာဏ်စမ်းပဟေesိများရှိပြီး၊ ရွေးချယ်မှုနောက်ဆုံးရွေးချယ်ခြင်းအဆုံးမှာရှိသည်။ သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အွန်လိုင်းတွင်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည်။ အပိုစာအုပ်များလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းတာ ၀ န်ခံသောလူကြီးများသင်တန်းကိုလည်း WorkBC မှထောက်ပံ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစိုးရရန်ပုံငွေကိုဒေသခံအလုပ်အကိုင်ဌာနများမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူများသည်တက်ကြွသောအလုပ်ရှာသူများဖြစ်ရမည်။ ၄ င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်စင်တာ၏ဖောက်သည်များဖြစ်ရန်လျှောက်ထားရမည်။ ငါတို့လာကြည့်ပါ အစိုးရရန်ပုံငွေ အသေးစိတ်အတွက်စာမျက်နှာ။
ကျော် 100 ဘာသာစကားများအတွက်
သင်၏ရွေးချယ်မှု၏ဘာသာစကားဖြင့်အွန်လိုင်းတာ ၀ န်ယူသောလူကြီးသင်တန်းကိုတက်ပါ။
Google Chrome Browser ကိုသုံးပါ။
သင်၏ဘာသာစကားဖြင့်သင်တန်းကိုကြည့်ရှုရန်အောက်ရှိ Link ကိုနှိပ်ပါ
Roxanne Penner သည်ဘီစီဘီ။ ပေါ။ မြစ်ရှိ 4Pillar အစောပိုင်းလေ့လာရေးစင်တာ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
သူသည်လိုင်စင်ရအစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေး၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ECE သင်တန်းဆရာဖြစ်သည်။
သူမသည်မိသားစုနည်းပြတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ 17 ကျော်နှစ်များအတွင်းကလေးများ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်မိသားစုများမှမွေးစားမိဘတစ် ဦး အဖြစ်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။
Roxanne သည်တာ ၀ န်ရှိသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုများကို X-NUMX နှစ်အလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်သင်ကြားပေးနေသည်။
ယခုသင်တန်းကိုလူကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့်မပေးသောသူများအတွက်အချိန်ဇယား (သို့) တည်နေရာကိုအွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ယူသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းကိုအွန်လိုင်းပဟေminiိများဖြင့်သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုလုံးဝ Self- ပွေးညီဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စတင်၍ အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါကျောင်းသားများသည်အွန်လိုင်းဖွင့်ထားသောစာအုပ်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုကြပြီးပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ကိုအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မည်။ Pass အမှတ်သည် 70% ဖြစ်ပြီးစာမေးပွဲအောင်ပြီးသည်အထိစာမေးပွဲပြန်ဖြေနိုင်သည်။
ပါ ၀ င်သူများသည်တာ ၀ န်ရှိသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းပြီးဆုံးခြင်းလက်မှတ်ရရှိရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ သင်ခန်းစာအားလုံးကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကိုစိတ်ကျေနပ်လောက်သောအမှတ်အသားဖြင့်ဖြေဆိုရန်အနည်းဆုံး 19 သက်တမ်းရှိရမည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ သင်ကြားမှုအတွင်း Roxanne Penner မှသင်မေးသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သူ့ကိုယ်သူအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့သည်။
အွန်လိုင်းတာဝန်ရှိလူကြီး သင်တန်းတက်ရောက်ရန်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပဲ! သင်တန်းမှအစအထိသင်တန်းသည်အလွန်သိရှိရန်နှင့်လိုက်လျှောက်ရန်လွယ်ကူသည်။
Roxanne နည်းပြဆရာအဖြစ်ကြီးစွာသောဖြစ်ခဲ့သည်! သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးကျွန်ုပ်၌ရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အမြဲတမ်းရနိုင်သည်။
တာဝန်ရှိသည့်လူကြီးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးပြီးနောက်စာမေးပွဲဖြေပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သစ်တွင်တာ ၀ န်ယူတတ်သောလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ray Thompson က
လိုင်စင်ရအုပ်စုကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများသို့မဟုတ်မူကြိုကျောင်းများရှိအစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးလက်ထောက်များကိုအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်း / ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဖြစ်။
ကျပန်းမိသားစုမိသားစု Drop-In အစီအစဉ်များ, မိသားစုကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလက်ထောက်သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ရာထူး
အွန်လိုင်းသင်တန်း $ 125
4Pillar အစောပိုင်းသင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းတာ ၀ န်ယူနိုင်သောလူကြီးများအတွက် 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ကိုကမ်းလှမ်းပေးသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ ငွေပြန်အမ်းမည့်သင်တန်းများအတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Roxanne Penner ကိုတာ ၀ န်ယူတတ်သောလူကြီးသင်တန်းပို့ချသူအဖြစ်ကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်။
ငါတာ ၀ န်ယူတတ်သောတာ ၀ န်ရှိသည့်လူကြီးသင်တန်းကိုတက်ပြီး၊ Roxanne Penner သည်အတန်းများကိုပျော်စရာကောင်းအောင်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးသူမရဲ့သင်ကြားမှုပုံစံကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
Cheryl R ကို Powell
တာဝန်ယူတတ်သောလူကြီးအွန်လိုင်းသင်တန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ငါလမ်းတစ်လျှောက်ရှိမေးခွန်းများဖြေဆိုရန် Roxanne ရရှိနိုင်ကြောင်းငါချစ်၏။